Mazai Akamonerwa - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Kutanga22 maminitsi4 vanhu
Iyi ndeimwe yemidziyo yemurume wangu yaanofarira uye ini ndinowanzo zviita mukati memwaka. nguva yakanaka. Kunyangwe chiri chokwadi, kuti rinenge zhizha rakanga rapfuura uye ini ndakanga ndisina kugadzirira iyi yekubheka.
Mavhiki akati wandei apfuura vabereki vangu vakauya kuzodya uye ini ndanga ndafunga nezvekosi yechipiri, asi yaive mumazuva iwawo paunenge uri "mukobvu" uye ndaisagona kufunga nezve chero yakapusa uye yakapfuma dhishi kamwe chete. Ndakataura nemwanasikana wangu wedangwe kuti ndaisaziva zvekuita kuti ndidye uye akakurumidza kuti: "Amai, mazai !! ..." Akanga asiri kureva ndiro iyi, asi mazai akaomeswa, anomupengesa, asi akandipa pfungwa yeiyi.resipi uye ini ndikati: mazai nguva ino ".
Mazai aya akagadzirirwa munguva pfupi uye chinhu chakanaka nezvechikafu ichi ndechekuti isu tinogona uzvigadzirire pachine nguva. Iwo ndeamwe eaya mabikirwo anotiburitsa mukukurumidza nekushanya, nekuti iwe wakavagadzira chinhu chekutanga mangwanani uye kana kushanya kuchisvika iwe unogadzirira zvese, isu tinongofanirwa kuenda kufiriji uye takananga patafura. .
Kana ndichibika mazai ari mudengu, ini ndinowedzera kumwaya vhiniga, sezvazviri tsenga kuitira kuti mazai arege kutsemuka kana uchibika.
Uye kana iwe uchida zvimwe mazano ekukukurudzira apa une kuumbwa pamwe nemazano akati wandei akasiyana.
1 Yakakangwa mazai
Inonaka recipe nemazai atinogona kugadzira pamberi.
Kubika nguva: 22M
Nguva yakazara: 22M
6 mazai makuru
800 g yemvura
Makani madiki maviri e tuna
1 diki gaba remiorivhi (ini ndinovaisa girini pitted)
1 diki gaba rebhero mhiripiri (tinoita zvidimbu zvidiki zvekushongedza)
julienned lettuce yakakoswa yekushongedza (ona gadziriro pano)
Isu tinoisa mazai mudengu uye tinochengetedza.
Isu tinoisa mvura mugirazi reiyo thermomix ndokuisa bhasiketi mukati. Isu tinoronga Maminetsi manomwe, tembiricha yevaroma, kumhanya 20.
Pakupera kwenguva, tinobvisa bhasikiti nerubatsiro rweiyo spatula uye kutonhodza mazai mumvura inotonhorera.
Negirazi rakachena, tinocheka iyo lettuce nekutevera hunyengeri uhu.
Isu tinosvuura mazai uye tinocheka muhafu kureba. Isu tinopatsanura yolks, toiisa mune yakachena uye yakaoma girazi uye woikwenya 2 masekondi, kumhanya 3.
Isu tinotora kunze kwegirazi mashoma ematafura e grated yolk yekushongedza gare gare nekuchengetedza.
Wedzera kune girazi pamwe neiyo grated yolk, iyo tuna, uye mayonnaise. Isu tinoronga 3 masekondi, kumhanya 3. Tinozadza chikamu chimwe nechimwe chezai nemusanganiswa uyu.
Isu tinoisa yakanyoroveswa uye yakaoma lettuce mune sosi yekushongedza uye isu tinoisa yakatenderedza yega yega nekuzadza. Mwaya mapunipuni akati wandei egrated yolk kumusoro uye isa muorivhi pamusoro pezai rega rakakomberedzwa nekamubhero kebhero mhiripiri, sekunge chiri chirafu, uye saka tine dhishi rakakura.
Ivo vanofanirwa kutorwa kutonhorera zvakanyanya. Kana isu tasara nezvakazadzwa, tinogona kuzvitora pachingwa chakashambiswa semacanapés.
Mamwe mashoko - 9 yakashatiswa mazai evha kuti unakirwe nezhizha
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Zvinokanganisa, Celiac, Nyore, Mazai, Lactose isingashiviriri, Asingasviki 1/2 awa, Zhizha mabikirwo
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Zvinokanganisa » Yakakangwa mazai
Aya mazai anonaka. Amai vangu vagara vakazvigadzira pamba, uye zvino ndave ndave kuzviita zvangu. Izvo zvakagadzirwa muchinguvana uye vanofarira vese. Uye zvakare, ivo vanotendera misiyano yakawanda, zvese zviri zviviri mukuzadza uye mukushongedza.
Wasarudza nzira yakanaka kwazvo yanhasi 😉
Vakapfuma sei! Pamba havasi kushayikwa muzhizha nekuti kuvava vakafanogadzirira zuva rinopararira zvakanyanya!
Zvese zviri mukufungidzira, zvakanaka kana chinenge zvese…. pane hunyanzvi hwako zvakare
Iwe unoona, mamwe mazai akaomeswa nenhamba yenguva dzandakaaita uye ivo vanoramba kubva pachirauro chiri mundiro, vachirovana neumwe neumwe, hafu yakakombama ... vaone….
Ndatenda zvikuru sekugara.
Vanotaridzika zvakanaka uye vanoratidzwa zvakanyatsonaka, ndeimwe yemidziyo yakagara yagadzirwa naamai vangu.
That !! Inotaridzika zvakanaka uye chii chakanaka precentacion hasi iwe yaunoda kutora imwe, maita basa, zvinotibatsira zvakanyanya, kutsvoda
Zvakanaka sei kuyeuka mamwe mabikirwo, mwanasikana wangu ariwo mumwe weaanofarira, kunyangwe huvos dzakakangwa dzichimutenderedza kupenga uye ini ndichachengeta nzira yacho, ndatenda
Zvakanaka kwazvo, zvakare vane pendi…. Ndakaisawo nyanya nyanya yakakangwa pamwe chete nemayonnaise uye anonaka kwazvo.
Handina kuzodya kwenguva yakareba, amai vangu vaizviita zvakanyanya.
Iyi vhiki yevhiki ndinoita.
Ichokwadi ndechekuti ine pendi, kakawanda inodyiwa nekuona. Kwazisai vese.
Amai vangu vaigara vachizvigadzira pamba, dzimwe nguva paKisimusi ... zvaishamisa zvikuru uye vana vese vaivada. Iye zvino ndinozviita uye zvechokwadi ivo vakanaka kwazvo. Edza iyi yekushongedza: Sevha anenge matatu kana mana ma yolks (akazara kana iwe ukashandisa makeke kana grated neiyo thermos kana zvisiri). Mune yakanaka dhishi isa dete yakatetepa yemayonnaise (ndinoigadzira nekuti tinoifarira zvakanyanya kugadzirwa) pamusoro payo mazai akaomeswa, asi takatarisa pasi, kwete sepikicha uye pane rezino reinoveza anchovy, tambo yehiripiri tsvuku (Ini ndakaisa kugadzira muchinjikwa) uye muorivhi (kana yakazadzwa neanchovy zvirinani) uye isu tinoibaya mumusoro wezai tichisiya muorivhi pamusoro. Kana zvese zvangoitwa, tinosasa maeki pamusoro pemazai ese (nechigayo chekudya ndinotarisira zvirinani: Ini ndinopfuudza maini acho panguva imwe chete yandinopa pamusoro pemazai, zvinoita sekunge kwanaya)
Kutsvoda, iwe uchandiudza.
Ichokwadi ndechekuti ivo vanonaka uye munhu wese anovada!
Ummmmm zvinonaka !!!!!
Chikafu ichi chinokuburitsa mumatambudziko chero nguva, kunze kwekuva akanaka hehe.Wese munhu anovafarira ... kunaka sei ...
Iko kushongedzwa kweplate kwakanakisa uye kunofadza.
Kutenda, kutsvoda !!!
Ndakazvigadzira nemusi weMugovera manheru, ndakadya chikafu neshamwari uye hapana kana imwe chete yakasara… zvinonaka !!!!. Kwaziso
mashura mhare yemota akadaro
Ndinoshuva dai vakatumira bhuku racho.
Ndinokutendai zvikuru kwazvo
Pindura minana galán mota